“Wasiirro Ayaanu Xataa Weydiinay Kaadhka Diiwaan-gelinta Markii Ay Doonteen Baasaboorka” Col. Maxamad Cambaro | Maalmahanews
“Wasiirro Ayaanu Xataa Weydiinay Kaadhka Diiwaan-gelinta Markii Ay Doonteen Baasaboorka” Col. Maxamad Cambaro
Taliyaha laanta socdaalka Jamhuuriyadda Somaliland Col. Maxamad Cali Yuusuf, ayaa beeniyay in Wasiirka Daakhiliga Cali Waran-cadde uu Baasabooro uga qaadayo laanta socdaalka laba nin oo Itoobiyaan ah oo ka shaqeeya Gurigiisa, waxaanu arrintaasi ku sifeeyay mid been abuur ah oo aan raad lahayn.
Taliyuhu waxa uu sidaasi ka sheegay shir jaraa’id oo ay shalay si wada jir ah xafiiskiisa ugu qabteen Wasiir Ku-xigeenka Amniga ee wasaaradda Arrimaha Gudaha Maxamed Muuse Diiriye.
“Warkaas ay ku qoreen Wargeysyaddu waa been, waana war aan sal iyo raadtoona laheyn, waxay warbaahintu sheegtay in Wasiir Cali Waran-cadde uu Baasaboor siiyay dad ajanabi ah oo aanu sharcigu u jidaynaynin inay baasaboorka Somaliland qaataan, balse arrintaasi may dhicin waxbana kama jiraan,”ayuu yidhi Taliyaha Laanta socdaalku.
Taliyuhu waxa uu sheegay in xataa Wasiirro Baasaboorka ka soo dalbaday ay ku xidheen inay keenaan kaadhkoodii jinsiyaddam waxaanu yidhi
“Qofka Somalilander-ka ah ee xaqa u leh ayaa la weydiiya aqoonsi Marka uu baasaboorka Somaliland qaadanayo. Waxa dhacday illaa heer Wasiirro soo doontay Baasaboorka aanu ku nidhi la kaalaya aqoonsigaagii amase kaadhkaagii jinsiyadda. markaa qof aan laheyn kaadhka diwaan-gelinta amase muwaadinka ma siino mana dhacdo, markaa ciddii qortay xeer ilaalinta ayaanu u gudbin doonaa halkii ay ka keeneen warkan aan jirin.”
Wasiir ku xigeenka wasaarada amniga Maxamad Muuse Diiriye ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland dhammaadka bishan ay dhammaan dadka aan u dhalan ay wadanka ka saari doonaan.
“Dadka la saarayo bil ayaynu siinay wixii ka baxaya ee aan kafiil laheyn ee dalka iska jooga, amase tahriibayaasha ah, waxaanu leenahay bishaa gudaheeda waa inay ku diyaar garoobaan maalintaas, ciidamadana goobo ayaanu u cayimi doonaa oo dadkaasi isugu imanayaan oo dadka laga qaadi doono layskana eryan maayo ee waxaanu dib ugu celinaynaa halkay ka yimaadeen. Waxaanu hore u sheegnay in iridaha wadanka laga soo galo baasaaboorna lagaga bixi karo, baasaaboorna lagu soo gali karo,”ayuu yjdhi Wasiir Ku-xigeenka Amniga ee wasaaradda Arrimaha Guduhu.